इजरायलका पूर्व मन्त्री इरानका जासूस ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
इजरायलका पूर्व मन्त्री इरानका जासूस !
पुस २८, २०७५ शनिबार ८:१४:१६ | एजेन्सी
इजरायलका एक पूर्व क्याबिनेट मन्त्री गोनेन सेगेवलाई इरानका लागि जासूसी गरेको अरोपमा ११ वर्षको जेल सजाय हुने भएको छ । इजरायली न्याय मन्त्रालयले यसबारेमा जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
सेगव सन् १९९० मा इजरायलका उर्जा मन्त्री रहेका थिए । उनी आफैले इरानका लागि जासूसी गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनीमाथि इजराली अधिकारी र सेनासँग जोडिएका सूचना चुहाएको आरोप लागेको छ । उनी नाइजेरियमा बसिरहेका थिए । उनलाई मध्य अफ्रिकी देश इक्विटोरियल गिनीबाट गिरफ्तार गरिएको थियो । इजरायलले गएको मे महिनामा उनलाई सुपुदर्गी गराएको थियो ।
६३ वर्षीय सेगेवलाई फेब्रुअरी ११ मा आधिकारिक रुपमा सजाय सुनाइनेछ । इरानले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
यसभन्दा पहिले पनि सन् २००५ मा कुटनीतिक राहदानी प्रयोग गरी नेदरल्याड्समा संदिग्ध औषधि तस्करी गरेको मुद्दामा सेगेव ५ वर्षका लागि जेल गएका थिए ।त्यसपछि उनको डाक्टरको लाइसेन्स पनि खारेज गरिएको थियो । तर उनी जेलबाट छुटेपछि नाइजेरिया गए । त्यहाँ भने उनलाई डाक्टरी गर्ने अनुमति दिइयो ।
इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा सेवाका अधिकारी शिन बेटले केही महिनाअघि भनेका थिए, ‘सेगेवले सन् २०१२ मा इरानी उच्च आयोगसँग सम्पर्क गरेका थिए । उनी दुई पटक इरान पनि गएका थिए । यो कुरा उनी आफैले स्वीकार गरेका थिए ।’
पूर्व मन्त्री सेगेवले उर्जा क्षेत्रसम्ग सम्बन्धित जानकारी, इजरायलका सुरक्षा क्षेत्र तथा सुरक्षा संस्थानका बारेमा इरानलाई जानकारी दिएका थिए ।
सेगेवले जासूसी गरेको स्वीकार गर्दै अनुसन्धानकर्ताहरुसँग भनेका थिए, ‘मैले इरानीहरुलाई छक्याइरहेको थिएँ । म इजरायलमा एउटा हिरोको रुपमा फर्कन चाहन्थेँ ।’
सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्तिपछि इरानमा धार्मिक कट्टरपन्थी सत्तामा आएका थिए । त्यसपछि इरानका नेताहरुले इजरायललाई ध्वस्त बनाइदिने धम्की दिँदै आएका थिए ।
त्यति मात्र होइन, इरानले इजरायलको अस्तित्व खारेज गर्दै उमाथि मुस्लिमभूमिमाथि गैरकानुनी कब्जा गरेको आरोप लगाएको थियो ।